Tsy mahita ny mpanonta ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix. - Payette Forward - Iphone
maninona no tsy handidy ny iphone 6s-ko
Tsy nahazo nifandray tamin'ny solosainako ny iphone
fivarotana fampiharana tsy avelao aho hanavao
Tsy mahita ny mpanonta ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Tsy afaka mampifandray ny iPhone amin'ny mpanonta ianao ary tsy fantatrao ny antony. Ny iPhone-nao dia mifandray amin'ny Wi-Fi sy Bluetooth, ary ny mpanonta anao dia alefa amin'ny AirPrint, saingy mbola tsy afaka manonta sary sy antontan-taratasy hafa ianao. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao ny antony tsy ahitan'ny iPhone-nao ny mpanonta anao ary atoro anao ny fomba fanamboarana ny olana ho tsara !
Inona ny atao hoe AirPrint?
AirPrint dia teknolojia noforonin'i Apple izay manamora ny fampiasan'ny mpampiasa Mac sy ny iOS sary sy antontan-taratasy hafa avy amin'ny fitaovany. Amin'ny AirPrint dia tsy mila manangana mpamily ianao hanonta ireo rakitrao avy amin'ny fitaovana Mac sy iOS. Azonao atao ny mitsidika ny tranonkalan'ny Apple hahitanao ny lisitra feno an'ny mpanonta afaka AirPrint .
Fa maninona no tsy mahita ny mpanonta ny iPhone-ko?
Amin'izao fotoana izao, tsy azonay antoka hoe maninona ny iPhone no tsy mahita ny mpanonta na ny iray amin'ireo fitaovanao no mahatonga ny olana. Misy singa telo miara-miasa amin'ny fanontana zavatra amin'ny iPhone-nao:
Ny mpanonta na mpanolotra pirinty azonao alefa AirPrint.
Ny router tsy misy tariby.
Ny olana amin'ny iray amin'ireto singa ireto dia afaka manakana ny iPhone tsy hahita sy hifandray amin'ny mpanonta anao. Araho ny dingana fanitsiana eto ambany ny diagnostika ary amboary ny tena antony tsy ahitan'ny iPhone-nao mpanonta anao!
Atsaharo ny iPhone, ny mpanonta ary ny router tsy misy tariby
Ny famerenana indray ny fitaovana ampiasainao dia dingana voalohany tsotra azonay andramana sy fanamboarana glitch rindrambaiko madinidinika. Misy fomba roa samy hafa hanombohana indray ny iPhone arakaraka ny maodely anananao:
iPhone 8 na aloha : Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pisehoan'ny slide slide 'slide to power off' amin'ny fampisehoana. Tsipiho havia havia havanana sy ankavanana ny kisary herinaratra hanidiana ny iPhone. Andraso segondra vitsy, avy eo tsindrio ary tazomy indray ny bokotra herinaratra mandra-pahatongan'ilay sary famantarana Apple eo afovoan'ny efijery.
iPhone X na vaovao kokoa : Tsindrio miaraka hatrany ary tazomy ny bokotra an-daniny sy ny bokotra volume mandra-pisehoan'ny 'slide to power off' eo amin'ny efijery. Esory ny kisary herinaratra avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone. Mba hamerenana ny iPhone indray dia tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-pisehon'ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery.
inona no dikan'ny hoe manonofy ny vohoka anao?
Ny fizotry ny famerenana amin'ny laoniny ny mpanonta sy ny router anao dia somary sarotra kokoa. Esory amin'ny rindrina izy ireo, ary ampidiro indray. Dia izay!
Atsaharo ny Wi-Fi & Bluetooth ary avereno
Ny famonoana ny Wi-Fi sy ny Bluetooth ary ny famerenana azy indraindray dia mety manamboatra glitch de rindrambaiko madinidinika manakana ny iPhone tsy hifandray amin'ireo tamba-jotra Wi-Fi na fitaovana Bluetooth.
Voalohany, sokafy ny Settings ary tap Wifi . Mba hamonoana Wi-Fi dia kitiho ny switch eo akaikin'ny Wi-Fi eo an-tampon'ny efijery. Ho fantatrao fa maty ny Wi-Fi rehefa fotsy ny switch.
Kitiho fanindroany ny switch mba hamerenanao Wi-Fi indray. Ho fantatrao fa mandeha indray ny Wi-Fi rehefa maintso ny switch.
Aorian'izay, miverena amin'ny Settings ary tap Bluetooth . Tahaka ny teo aloha ihany, tsindrio ny switch eo an-tampon'ny efijery eo akaikin'ny Bluetooth hamonoana azy. Avy eo, kitiho fanindroany ny switch mba hamerenana Bluetooth indray.
Ny fifandraisanao amin'ny Internet angamba no omena tsiny raha mbola manana olana ianao amin'ny fampifandraisana ny iPhone (na fitaovana hafa) amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao. Zahao ny lahatsoratray hafa raha te hahalala izay hatao rehefa Tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone !
iphone xs mampiseho ny isan-jaton'ny bateria
Vaovao farany ny iPhone (Ary raha azo atao)
Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mitazona ny iPhone sy ny mpanonta anao hatrany ianao miaraka amin'ireo kinova farany ny rindrambaiko. Ny fampiasana fitaovana misy rindrambaiko efa tonta dia mety miteraka olana isan-karazany!
Voalohany, mandehana any amin'ny Settings -> General -> Fanavaozana ny rindrambaiko amin'ny iPhone hahitanao raha misy kinova iOS vaovao. paompy Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana iOS vaovao.
Zahao ny tranokalan'ny mpanamboatra mpanonta anao raha hahitana raha misy fanavaozana, na raha azo havaozina ny mpanonta anao. Tsy ny mpanonta printy rehetra no manana rindrambaiko azo havaozina.
Adinoy toy ny fitaovana Bluetooth ny mpanonta anao
Rehefa mifandray amin'ny fitaovana Bluetooth ny iPhone voalohany dia mamonjy angona momba ilay fitaovana ary ny fomba hifandraisana amin'ny fitaovana . Raha niova io fizotry ny fifandraisana io dia mety hanakana ny iPhone tsy hifandray amin'ny mpanonta amin'ny alàlan'ny Bluetooth ianao. Amin'ny fanadinoana ny mpanontao anao amin'ny alàlan'ny fitaovana Bluetooth dia azontsika atao ny mampira azy amin'ny iPhone anao indray toa ny fotoana voalohany.
Sokafy ny fikirana ary kitiho Bluetooth . Mitadiava ny mpanontao ao amin'ny lisitra nantsoina My Devices ary tap ny bokotra fampahalalana (ilay manga i) eo ankavanany. Farany, tap Adinoy ity fitaovana ity hanadino ny mpanontao amin'ny iPhone.
Miverena any Fikirana -> Bluetooth hanombohana mampifandray ny iPhone amin'ny mpanonta anao. Hiseho eto amin'ny lisitra etsy ambany ny anaran'ny mpanonta anao Fitaovana hafa . Tsindrio ny anaran'ny mpanonta anao hampifangaro azy amin'ny iPhone-nao!
paoma mikasika ny paoma tsy mandeha
Ny famerenana ny fikirana tambajotra ao amin'ny iPhone dia mamafa ny Bluetooth, Wi-Fi, VPN, ary ny fikirakira finday ao amin'ny iPhone ary mamerina azy ireo amin'ny hadisoan'ny orinasa. Raha tokony hanara-maso olana Bluetooth na Wi-Fi manokana amin'ny iPhoneo izahay, dia hiezaka ny hamafa azy tanteraka. Aorian'ny fanatanterahana ity famerenana ity dia mila miditra indray ny teny miafinao Wi-Fi ianao ary mampifandray indray ireo fitaovana Bluetooth anao.
Raha hamerina ny fikirakira tamba-jotra amin'ny iPhone dia mankanesa any Fikirana -> Ankapobeny -> Haverina ary tap Avereno ny fametrahana ny tambajotra . Avy eo, paompy Reset Network Settings indray hanamafisana ny famerenana. Ho faty ny iPhone-nao, hamerina ireo fikirana ao anaty tamba-jotra, ary hiverina eo indray.
Raha mbola tsy mahita ny mpanontao ny iPhone dia tonga ny fotoana hifandraisanao amin'ny fanohanan'ny Apple. Ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia afaka hamaha olana momba ny rindrambaiko sarotra kokoa na olan'ny fitaovana. FITSIDIHANA Tranonkala mpanohana an'i Apple hanangana antso an-tariby, fifampiresahana an-tserasera, na fanendrena ao amin'ny Apple Store anao eo an-toerana.
taratasy famelana heloka ho an'ny ohatra fifindra-monina
Mifandraisa amin'ny mpanamboatra mpanonta
Azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny hiantso ny laharan'ny fanohanan'ny mpanjifa ny orinasa nanamboatra ny mpanonta. Mety hisy ny olana momba ny fitaovana miaraka amin'ny mpanontao anao izay ny mpanamboatra ihany no afaka manampy anao. Mba hahitana ny laharan'ny fanohanan'ny mpanjifa mpanamboatra mpanonta anao, Google 'fanohanan'ny mpanjifa' ary ny anaran'ny mpanamboatra.
Ataovy anaty pirinty!
Nahita sy nifandray tamin'ny mpanonta anao ny iPhone-nao! Izao dia ho fantatrao tsara izay hatao amin'ny manaraka raha tsy mahita ny mpanontao ny iPhone. Aza misalasala mamela fanontaniana hafa anananao momba ny Payette Forward ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra etsy ambany.